पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 05 2018 |3मिनेट पढ्न
थाहै नपाई विवाहित पुरुषहरु संग प्रेम पर्नु गर्ने धेरै महिला छन्, धेरै अरूलाई मनसायले रोमांच लागि विवाहित पुरुष खोज्न जबकि (यमक इरादा) एक मानिस संग हुनुको गर्ने प्राविधिकरुपले संयुक्त राष्ट्र-उपलब्ध छ. तथापि, प्रश्न सधैं यो एक विवाहित मानिस प्रेममा पर्नु सही छ कि छैन भनेर हेर्न बाँकी?
एक विवाहित मानिस लागि खस्कँदै सही लाग्न सक्छ, मानिस भन्छन् विशेष गरी यदि तिनीहरूले साथ नै महसुस. साथै, यस्तो अवस्थामा स्त्री पनि मानिस चाँडै पत्नी अलग हुनेछ भनेर सुरक्षाको झूटो अर्थमा प्राप्त हुन सक्छ, आफ्नो सम्बन्ध अटुट ढकमक्क गर्न सकोस् भनेर. तैपनि, एक भ्रम, निम्न कारणहरू लागि पूर्ण टूट गर्न आवश्यक.
महिला स्वयं सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ
एक परिवार संग एक मानिस एक वास्तविक सम्बन्ध मा एक महिला भएको को सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्षम हुन कहिल्यै. मानिस हेरचाह उनको हेरचाह गर्न आफ्नो समय निकालेर छ तापनि, प्रेम, र उपहार, सत्य छ, यो कुरा परिवर्तन हुनेछ!
यस्तो एक महिला पनि मानिसको पत्नी को जूता आफूलाई राख्न प्रयास गर्नुपर्छ. तिनीहरूले कसरी अर्को महिलाले उनीहरूलाई पनि त्यसै गरे भने लाग्छ? तिनीहरूले साँच्चै आफूलाई आदर भने, त्यसपछि तिनीहरूले गरिरहेको अन्त मात्र कुरा एक परिवार खण्डन छ भनेर बुझ्न गर्नुपर्छ, र कुनै पनि स्त्रीको गर्न चाहनुहुन्छ एक लेबल छैन, म आशा!
मानिसहरूको पत्नीहरू छोड्न कहिल्यै
समेत मानिसहरू आफ्नो नयाँ पाइने प्रेम वास्तविक सम्बन्ध छ सकोस् भनेर तिनीहरूले चाँडै आफ्नो पत्नीहरू अलग हुनेछ भनेर फेरि मा र अधिक गाउँछन् भने, यो कहिल्यै हुनै लागेको गर्नुपर्छ. उनीहरूलाई सम्बन्ध छ सहमत जो महिलाहरु पाउन भने, थाह तिनीहरूले परिवार छ कि, त्यसपछि मानिसहरू एक सान्त्वना क्षेत्र मा प्राप्त. यस अवस्थामा, तिनीहरूले निश्चित स्थिति-यथास्थिति कायम गर्न चाहनुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो परिवारको छोड्ने इच्छा छैन देखि.
मानिसको परिवार विचार
महिला, स्वार्थी हुन छैन! कि विवाहित मानिस संग सम्बन्ध गाँस्न निर्णय अघि, बर्बाद हुन गइरहेको छ परिवार सम्झना. संलग्न छोराछोरी छन् भने परिस्थिति झन् जटिल बन्दै प्राप्त हुनेछ. मानिस तिनीहरूलाई छोड्ने निर्णय यदि छोराछोरीलाई निश्चित खराब असर हुनेछ. अनि दशकको पत्नी बिर्सनुहुन्न गरौं, जीवनको लागि भताभुङ्ग हुन सक्छ गर्ने.
अरू केही लागि भने, त्यसपछि परिवार एकाइ यो एक विवाहित मानिस प्रेममा पर्नु सही होइन कि स्त्री विश्वस्त गर्नुपर्छ.
महिला तिनीहरूले योग्य भन्दा कम लागि व्यवस्थित गर्नु हुँदैन
किन पृथ्वीमा, एक सुन्दर हुनेछ, महिला बौद्धिक र स्मार्ट एक वास्तविक सम्बन्ध मा प्रतिबद्ध हुन सक्दैन मानिस को लागि व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ, मानिस विवाह छ किनभने? यस्तो स्त्री पूर्णतया एक वास्तविक सम्बन्ध भएको समर्पण गर्ने एक एक मान्छे को लागि देख अझ राम्रो हुने थिएन? महिला एकल मानिस आकर्षित गर्न आफू र आफ्नो क्षमता मा शैली र विश्वास गर्नुपर्छ, जसलाई तिनीहरूले संलग्न कुनै तार सम्बन्ध भाग लिन सक्छौं.
यो प्रेम गुँड तोडने बारेमा दुःखी महसुस गर्न ठीक छ
प्रेम नियन्त्रण गर्न कठिन भावना छ. त्यति एक महिला साँच्चै र गहिरो विवाहित मानिस प्रेम अनुरुप, वास्तविकता सम्बन्ध कहीं गइरहेका हुँदैनन्. यस कारण, यो ढिलो होस् यो अन्त गर्न राम्रो छ, बरु पछि भन्दा, निको पार्न पर्याप्त समय प्राप्त गर्नको. यो सबै मा सजिलो हुनेछैन भनी पक्का हुन, तर यो अन्त मा यो लायक हुनेछ.
अरूको राय ले हुनदिनु कदापि नगर्नुहोस्
एक विवाहित मानिस संग सम्बन्ध मा एक महिला सबै कुनामा देखि अरूलाई न्याय हुनेछ. स्त्रीले, यसरी, यो गर्न सही कुरा हो किनभने बलियो हुन र मानिस संग बन्द तोड्न आवश्यकता. साथै, यो बन्द तोड्न सक्ने स्त्रीको फाइदाको लागि हो, पूर्णतया सम्बन्ध भएको प्रतिबद्ध सकिन्छ मानिस पूरा गर्न सक्षम हुन.
कुनै पनि कारण मानिस सम्पर्क छैन
एउटी महिला विवाहित मानिस संग टूट एक पल्ट, त्यसपछि यो मानिस सम्पर्क सबै प्रकारका अन्त गर्न जरूरी छ. स्त्रीले पनि मानिस संग संपर्क मा प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्छ. यो निको हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ.
कुनै एक त्यो या त्यो प्रेम पर्नु नियन्त्रण गर्न सक्छन्, तथापि, यो एक विवाहित मानिस प्रेममा पर्नु ठीक होइन भनेर सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ. कि नोट मा, विवाहित पुरुष संग प्रेम मा पहिले देखि नै हो जो महिलाहरु को लागि, एक तोडने माथि लागि आफ्नो समय!